Lock & Lock Hello Kitty Rectangular Container (600 ML) - Pink | Buy online | SHOP.COM.MM
Lock & Lock Hello Kitty Rectangular Container (600 ML) - Pink
အရည်အသွေးမှာပြောစရာမလိုတဲ့ lock & lock
ထမင်းဘူးတွေက သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြင် အရည်အသွေးကလည်းပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းတဲ့အတွက်အရမ်းကြိုက်ပါတယ် Read more Hide
ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။ များများဆန့်ပြီး အကြမ်းခံတယ်။ Lock and lock တံဆိပ်ဆို အားလုံးကောင်းတယ်။ Read more Hide
Hello Kitty ?????????????????? - 600ML - ?????????
Specifications of Hello Kitty Rectangular Container (600 ML) - Pink